ओलीको उपचार खर्च = भ्रम कति बास्तविकता कति ? - Baikalpikkhabar
ओलीको उपचार खर्च = भ्रम कति बास्तविकता कति ?
सरकारद्वारा सवा करोड भुक्तानी
काठमाडौं / सत्तामा रहनेले लुटको परम्परा तोडेको भन्दै त्यसबेला देशवासी खुशी भए, जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै खर्चमा सिंगापुरमा स्वास्थ्योपचार गर्न लागेको खबर सुने । देशवासी फेरि पनि खुशी भए, जब आफ्ना प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वदेशमै, अनि आफ्नै खर्चमा सफल भएको सुने । तर, निजी खर्चका कुरा हल्लामात्र रहेछन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीको उपचारका लागि राज्यकोषबाट करोडौँ रकम खर्च भएको रहेछ ।
०७६ साउन र भदौ गरी दुईपटक स्वास्थ्योपचारका लागि ओली सिंगापुर जाँदाका सरकारी निर्णय र खर्च विवरण प्राप्त भएको छ । उहाँको स्वास्थ्योपचारमा मात्रै अमेरिकी डलर ७७ हजार एक सय ३० र ३७ सेन्ट सरकारी कोषबाट खर्च भएको थियो । सिंगापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलले दिएको बिलका आधारमा नेपाल सरकारले उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो ।
कतिसम्म लापरबाही र कच्चापन भने टिकट सार्दा मात्रै पनि लाखौं रकममा देशको चुना लागेको छ । एउटा सानो उदाहरण हो, ३ जनाको बिजनेश क्लासको सिट सिल्कबाट थाइएयरमा सार्दा प्रतिव्यक्ति १२४५ का दरले ३७३५ डलर, ५ जनाको इकोनोमी क्लासको टिकट परिवर्तनबापत ९६५ का दरले ४८२५ अमेरिकी डलर, साउन २८ बाट ८ जना भोलिपल्टको मिति सारेर फर्कंदा ३७५ का दरले ३ हजार डलर ।
सोमबार, १४ भदौ, २०७८, बिहानको ०९:१६ बजे